Etsy: Handmade & Vintage Goods 5.12.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.12.1 လြန္ခဲ့ေသာ2ရက္က
Application မ်ား ေစ်း၀ယ္ျခင္း Etsy: Handmade & Vintage Goods
Etsy: Handmade & Vintage Goods ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
တဦးတည်း-of-a-ကြင်နာပစ္စည်းများသန်းပေါင်းများစွာစျေးဝယ်ခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအရာကိုရှာပါ။ အဆိုပါ Etsy app ကိုနှင့်အတူ, သင်အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်ဖြစ်၏စျေးကွက်, စပျစ်သီးနှင့်ဖန်တီးမှုကုန်ပစ္စည်းများစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏များအတွက်လက်ဆောင်များဖှယျ၏တာဝန်ယူထားသော collection များကို, ထူးခြားတဲ့မင်္ဂလာဆောင်စိတ်ကူးများနှင့်လက်ဖြစ်လက်ဝတ်ရတနာပါရှိပါတယ်။ နှင့်ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လက်ဝတ်ရတနာများအတွက်အကြံပြုချက်များ, အနုပညာ, အဝတ်အစားနှင့်ပရိဘောဂလည်းသင်လိုအပ် (သို့မဟုတ်တကယ်တကယ်ချင်တယ်) အတိအကျဘာကိုကူညီရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ 29+ သန်းအဖွဲ့ဝင် join နှင့်အမှန်တကယ်အထူးင့်တစ်ခုခုရ။
Etsy ၏တစျလောကလုံး app ထဲမှာဖြစ်ပါသည်:
- နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုပြန်လည်လည်ပတ်ရန်အကြိုက်ဆုံးအဖြစ်ပစ္စည်းများနှင့်စျေးဆိုင် Save
- ထိုတစ်မိနစ်တစ်ဦးအလို့ငှာသင်္ဘောများအကြောင်းကြား Get
- Talk ကိုတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့မေးခွန်းတွေအားလုံးဖြေကြားရပိုင်ရှင်တွေစျေးဝယ်ရန်
- သင့်အရသာ လိုက်. ပြတိုက်မှူးအကြံပြုချက်များ Explore
- အလျင်အမြန်ထွက် Check နဲ့လုံလုံခြုံခြုံက Android Pay ကိုအပါအဝင်ငွေပေးချေမှု options တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်အဝ suite ကိုသုံးပြီး
- Etsy ရောင်းသူ featuring လာမည့်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အနီးအနားရှိစတိုးဆိုင်များရှာဖွေရန်
- အင်္ဂလိပ်စာ, ဂျာမန်, ပြင်သစ်, ဒတ်ခ်ျ, အီတလီ, စပိန်နှင့်ဂျပန် Now ကိုရရှိနိုင်
သင်တစ်ဦး Etsy ဆိုင်ရှိပါက Etsy app ကိုပေါ်မှာငါတို့အခမဲ့ရောင်းသင်သည်သင်၏ဆိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုတယ် tools တွေကိုအပေါငျးတို့သထားပါတယ်: ဖြစ်စဉ်ကိုအမိန့်, စာရင်းများ add, သင့်ဆိုင်မှာစာရင်းဇယားနှင့်ပိုပြီးရှုမြင်ကြသည်။
app ကိုအတူအစီရင်ခံစာပြဿနာများကို: https://www.etsy.com/teams/7720/bugs/discuss/
site ကို status ကိုမွမ်းမံမှုများရယူပါ: http://etsystatus.com/
Etsy ကမ္ဘာတဝှမ်းလူတွေ, အောင်ရောင်းထူးခြားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်ချိတ်ဆက်တဲ့ဈေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်တစ်ဦးထက်ပိုပြည့်စုံရာနှင့်ကြာရှည်ခံကမ္ဘာကြီးကိုတည်ဆောက်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေနဲ့စီးပွားကူးသန်း reimagine ရန်ဖြစ်ပါသည်။
Etsy: Handmade & Vintage Goods အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Etsy: Handmade & Vintage Goods အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Etsy: Handmade & Vintage Goods အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Etsy: Handmade & Vintage Goods အား အခ်က္ျပပါ
pocketappz စတိုး 40.69k 7.38M
Etsy: Handmade & Vintage Goods ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Etsy: Handmade & Vintage Goods အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Getjar Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.etsy.com/legal/privacy
App Name: Etsy: Handmade & Vintage Goods
Release date: 2018-12-12 18:59:26
လက်မှတ် SHA1: 05:A6:60:56:85:E6:2F:E0:72:17:3C:ED:5E:0C:0E:4B:95:2D:9F:73
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Joshua Halickman
အဖွဲ့အစည်း (O): Etsy
နယ်မြေ (L): Brooklyn
Etsy: Handmade & Vintage Goods APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ